१३ देशका लागि को–को बन्दैछन् राजदूत ? - HAMRO YATRA
१३ देशका लागि को–को बन्दैछन् राजदूत ?
काठमाडौं, माघ । सरकारले १३ मुलुकका दूतावासका लागि बिहीबार राजदूत नियुक्त गर्ने भएको छ। सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको भागबन्डाका आधारमा राजदूत नियुक्ति हुन लागेको हो। माओवादी र राप्रपाले टुंगो लगाइसकेका छन् भने कांग्रेसबाट बिहीबारसम्म टुंगो लाग्ने भएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।